Ciyaaryahan Paul Pogba Oo waraysi dhinacyo badan leh kaga waramay Noloshiisa
HomeAfricaCiyaaryahan Paul Pogba Oo waraysi dhinacyo badan leh kaga waramay Noloshiisa
03/06/2014 Khadar Dirir
Jariiradda Sports Male ayaa su’aalo dhowr ah weydiisay laacibka kooxda Juventus Paul Pogba, isagoo ku sheegay in waqtigiisii ugu xumaa uu ahaa waayihii uu la joogay Manchester United, riyadiisa ugu weynna ku sheegay inuu koobka adduunka kaga horyimaado mataanaha la dhashay.
Haddaba akhristayaasha sida tooska ah ugu xidhan Qaybta isboortiga ee Wargeyska Ogaal waxaanu maanta u soo gudbinaynaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo lala yeeshay ciyaaryahanka u dhashay dalka Faransiiska ee Pogba.
Su’aalihiina waxay u dhaceen sidan:
S- Waa kuma geesigaaga kubadda cagtu?
J-Nasiib ayaan ku leeyahay inaan la ciyaaro geesigeyga Andria Pirlo, marna qarin maayo inaan doonayo inaan noqdo sidiisa oo kale, wuxuu ku guuleystay wax kasta
S-Maxaad noqon lahayd haddii aadan ahayn lahayn ciyaaryahan?
J- Marka la eego da’da aan ku bilaabay ciyaarista kubadda cagta, waxaan ku faraxsanahay inaan marna ku fikirin su’aashaas oo kale
S-Wakhtigee ugu fiicnaa mihnaddaada kubadda cagta?
J-Kalama dooran karo labadii horyaal ee aan la qaaday Juventus iyo koobkeygii ugu horreeyey ee aan la qaaday xulka Faransiiska, labadoodaba qaas ayey ii ahaayeen.
S-Wakhtigee kuugu xumaa mihnaddaada kubadda cagta?
J-Wiigaygii Manchester United, dabcan markaad joogto koox sidaan oo kale u weyn, waxaad fahmeysaa inaad u baahan tahay dulqaad, si aad u hesho fursaddaada, laakiin maan dareemin xushmad iyo qiimeyn toona, ciyaaryahan ahaan iyo shaqsi ahaan-ba.
S-Haddii uu gurigaagu guban lahaa maxay noqon lahayd mulkiyaddaada ugu horreysa ee aad badbaadin lahayd?
J-Waan ogahay waa jawaab cad, laakiin reerkeyga ayaan badbaadin lahaa, ma haysto mulkiyad qiimahaas iigu fadhida.
S-Heesteed ka heshaa?
J-Heesaha Kanye West iyo Jay Z, maaha inay kaliya muusik fiican sameeyaan, laakiin waxay dhiiri-gelin u yihiin dhallinyarada Madowga ee adduunka
S-Waa kee Barnaamijka aad TV-ga ugu jeceshahay?
J- Waxaan jeclahay inaan daawado goos gooska
S-Filimkee buu ahaa filimkii kuugu dambeeyey ee aad daawato?
J-The Wolf of Wall Street
S-Haddii aad casho la yeelan lahayd saddex qof oo caan ah yey noqon lahaayeen?
J-Zinedine Zidane, Jay Z iyo Usain Bolt
S-Wax ma karin taqaanaa?
J-Waxaan sameyn karaa waxyaabaha fudfud sida, Baasto, hilib digaag iyo Kalluun
S-Halkee ka heshaa inaad fasaxaaga ku qaadato?
J-Waxaan jeclahay meel diirran, sida xaabta Miamia
S-Sir noo sheeg?
J-Mataanaha ila dhashay oo matalaya xulka qaranka Guinea waa riyadeyda inaan maalin soo gaadhaan koobka adduunka, ayna ku dhacaan Faransiiska, sidaa darteen aan hal garoon ku wada ciyaarno.
Xogaha Kaa Daahan – Rikoodhka 71 Gool Ee Messi Ka Dhaliyay Champions League
Video :- Tunisia 1-1 Cape Verde
18/01/2015 Abdiwahab Ahmed
Saadaasha Finalka Koobka Aduunka : Germany vs. Argentina